Belkısတွင်ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များတိုးချဲ့မည် - RayHaber
Homeတူရကီအရှေ့တောင် Anatolia ဒေသကြီး27 GaziantepBelkısတွင်ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များတိုးချဲ့မည်။
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 27 Gaziantep, အရှေ့တောင် Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
Sehitkamil ခရိုင်၏ Belkis ခရိုင်၊ Gaziantep Metropolitan မြို့တော်ဝန် Fatma Sahin သည်ရပ်ကွက်အတွင်းသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ Sahin, အနီးအနားရှိအဖွဲ့၌မလုံလောက်ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များ၏ပြsolveနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်, Belkis ရပ်ကွက်အတွင်းရှိဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုစတင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
လူမှုရေးမြှို့နယ်၏အမည်နှင့်အတူစကားပြော, Fatma Şahinပြtheနာများကိုပြseeနာများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားများနားထောင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းသွားရောက်ခဲ့သည်။ Muhtars ဥက္ကchairman္ဌ inahin ၏ရပ်ကွက်အတွင်းရှိပြtheနာများကိုဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းချက်ကို ဦး တည်သည့်ပြproblemနာဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းသည်နိုင်ငံသားများ၏နှလုံးသားထဲတွင်ထီးနန်းကိုထူထောင်ခဲ့သည်။
Mesaisine, Sahin မှစတင်ခဲ့သည့်ခရိုင်၏ŞehitkâmilBelkısခရိုင်, လေ့လာတွေ့ရှိချက်များပေါ်တွင်ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှုများအပြင်ရပ်ကွက်အတွင်း၏အားနည်းချက်များကိုဖော်ထုတ်အဖြစ်, အဖွဲ့သည်အားနည်းချက်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ညွှန်ကြားချက်ပေးခဲ့သည်။
ရပ်ကွက်လူထု၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသိပ်သည်းမှုနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အကြီးအကဲ Enver Özekici'yle Sahin နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးပါကပြီးစီးသည့်အလုပ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နယ်နိမိတ်များတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များများတိုးမြှင့်လိုသောဆန္ဒအပေါ်တုန့်ပြန်မှုနည်းပါးပြီး၊ သမ္မတယူဆောင်ခြင်းဖြင့်မှတ်တိုင်များကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုနေသော Mukhtar Özekici'yiသည်ရပ်နားထားသောနိုင်ငံသားများသည်မော်တော်ယာဉ်ကိုအနီးကပ်စိတ်ဝင်စားကြပြီးခြေထောက်တွင်စကားများပြောဆိုကြသည်။
သမ္မတ Fatma Sahin အားရေပြတ်လပ်မှုကိုဖြေရှင်းရန် Belkis ရပ်ကွက်သည်နေထိုင်သူများ၏ကြိုးပမ်းမှုများ၊ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိကတ္တရာများနှင့်အပြီးသတ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုချို့တဲ့မှုများပြီးစီးခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းသွားမည်ဟုသူကပြောသည်။
ခရီးသည်စွမ်းဆောင်ရည် Gaziantep အတွက်လမ်းရထားမှတ်တိုင်၏အိတ်စတန်းရှင်းတိုးမြှင် 14 / 01 / 2018 Gaziantep မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းခွဲGaziulaşအားဖြင့် run အဆိုပါလမ်းရထားမှတ်တိုင်မွမ်းမံနှင့်လှည်းတိုးပွားလာသည်၎င်း၏ခရီးသည်တင်စွမ်းရည်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အဖြစ်ကြောင့်စွမ်းရည်အတွက်ရရှိလာတဲ့တိုး system ပေါ်တွင်အပြေးရထားလမ်းယာဉ်များ sequence ကိုဖြစ်လာမှအလုပ်လုပ်နိုင်နှင့်ရပ်တန့်၏ extension ကို, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းရထားပိုနှစ်သက်သူကိုခရီးသည်များ၏အရေအတွက်တိုးဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လေ့လာရေးလည်းအခွင့်အလမ်းပိုအဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖန်တီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါGaziulaşအာဏာပိုင်များ၏ဖော်ပြချက်အရ, တစ်ခု extension ကိုမရောက်မီလုပ်ဘူတာရုံလှည်းအများဆုံး drive ကိုအချိန် 2017 38 အတွက်ကားများနှင့်ဖွဲ့ခဲ့သည်။ ဤနည်းကခရီးသည်နှစ်သိမ့်အတွက်တိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်။ Gaziulaşအရာရှိများ, န်ထမ်းသို့မဟုတ် 2018 40 အပေါ်သွားကြဖို့စီစဉ်ထားသည်ယခုနှစ်အတွင်းကားများပင်နေ့စဉ်အရေအတွက်က ...
ဂျာမနီမှာရထားလမ်းလက်ဝါးကြီးအုပ်ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တိုးမြှင့်မက်လုံးပေး 24 / 04 / 2014 ဂျာမနီမှာဖွံ့ဖြိုးဆဲရထားလမ်းလက်ဝါးကြီးအုပ်မြှင့်တင်ရန်ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီများကထမြောက်တော်မူပြီ: အလက်ဝါးကြီးအုပ်၏အဆုံးတွင်အောက်ပါ 2013 ဂျာမန်မီးရထား (DB) ကတည်းကဂျာမနီမှာခရီးဝေးခရီးသွားလာနှင့်အတူသွားလာအချင်းချင်းဘတ်စ်ကားတစ်ခုတိုးကြုံနေရသည်။ ပျှမ်းမျှတွင်ရထားစီးကနေဘတ်စ်ကားခရီးစဉ်ကိုယေဘုယျအား 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြအကြားဘုံဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် Baden-Württemberg (BW) ပါဝင်ခဲ့ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီမြှင့်တင်ရန်သောပြည်နယ်များအကြား။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှ 73 ဒီနှစ်ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီများကအားပေးအတိုင်းအတာကိုယူ။ မက်လုံးပေးပမာဏယခုနှစ်5ယူရိုသန်းကိုတွေ့ပါလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီများမက်လုံးပေး၏ပြည်နယ်၏အဆိုအရအဆိုပါ 17 500 157.500 အကြားတထောင်ယူရိုကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ ကားတစ်စီးပေးထားမက်လုံးပေး၏မရှိခြင်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ပါတယ် ...
İzmirdeဆောင်းရာသီဇယား, ဘတ်စ်ကားများနှင့် Metro လေ့လာရေးခရီးတိုးမြှင့် 19 / 09 / 2016 İzmirdeဆောင်းရာသီဇယား, ဘတ်စ်ကားနှင့်မြေအောက်ရထားလေ့လာရေးခရီးအနုပညာခဲ့: İzmir Metro Inc ကိုအတူ ESHOT ၏ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ, လျှောက်လွှာကျောင်းဖွင့်ပွဲနှင့်အတူစက်တင်ဘာလ 19 တနင်္လာနေ့ကနေဆောင်းရာသီမှာကာလသို့ဝင်။ ဘတ်စ်ကားနှင့်မက်ထရိုပျံသန်းမှု၏ကြိမ်နှုန်းတိုးပွားလာလျက်ရှိသည်။ ESHOT ဌာနချုပ်နှင့်İzmir Metro Inc ကို, 19 စက်တင်ဘာလ, ကျောင်းကျောင်းများ၏ဖွင့်လှစ်နာရီနှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အချိန်ပွနျလညျဖှဲ့စညျးခဲ့သညျအကောင့်သို့ယူပြီးတိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အချိန်ကို xnumx'y မှတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်နေဆဲအချိန် 1286 186 ဘတ်စ်ကားဘတ်စ်ကားဘတ်စ်ကားအရေအတွက်။ မြို့ကိုလာမယ့်သစ်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဘတ်စ်ကား 1472 ၏နေ့ ESHOT အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအရာရှိများအကြို ...
Konya ဘတ်စ်ကားကွိမျလဲ! ဓါတ်ရထားအချိန်တိုးမြှင့် 12 / 06 / 2017 Konya ဘတ်စ်ကားကွိမျလဲ! ဓါတ်ရထားအချိန်နာရီအချိန်စုစည်းဖို့လမ်းရထားလမ်းမှ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ညဉ့်ဘတ်စ်ကားတိုးလာသည့်ဖြည့်စွက်ထားကြပါတယ်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းနှင့်ရထားစနစ်များဦးစီးဌာနမှ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကြေညာချက်ပြောပါတယ်: "12 နာရီတနင်္လာနေ့, ဇွန်လပေါ်မှာရှိသမျှဘတ်စ်ကားလိုင်းများပေါ်တွင်အချိန်ကုန်ထံမှထပ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအခွန်ပျဉ်ပြားနှင့်အ www.konya.bel.t ၏နယူးအချိန်ဇယားဝဘ်ကနေကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘော့စနီးယား၏တနင်္လာနေ့ Seljuk ခရိုင်နှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား, ကိုဆိုဗိုနှင့် Sandzak ရပ်ကွက်အတွင်းကနေတနည်းကား, 12 ဇွန်လအမှတ်ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းကနေ '' ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား Tramway Drive ကိုလိုင်း '' အောင်မြင်ရည်ရွယ်ချက်မှာ 58 လိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးထက်ပိုထိရောက်နှင့်ထိရောက်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု ...
ခရီးသည်စွမ်းဆောင်ရည် Gaziantep အတွက်လမ်းရထားမှတ်တိုင်၏အိတ်စတန်းရှင်းတိုးမြှင်
Konya ဘတ်စ်ကားကွိမျလဲ! ဓါတ်ရထားအချိန်တိုးမြှင့်
ရုရှားမီးရထား 's စင်းလုံးငှားမြို့တော် 13 ဘီလီယံကိုရူဘယ်တိုးပွားလာပါလိမ့်မည်
ဓါတ်ရထား, Metrobus နှင့်မဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာဆေးလိပ်သောက်တားမြစ်ရန်ညီ